Pedro Santamaría. Kubvunzana nemunyori we At the service of the empire | Zvazvino Zvinyorwa
Pedro Santamaría. Kubvunzana nemunyori we At the service of the empire
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Mabhuku, Novela
Photography: Kutendeseka kwaPedro Santamaría.
Pedro Santamaria ndeimwe ye inonyanya kufarirwa vanyori venhoroondo vanyori yemakore aya, tichifunga kuti yakatanga kutsikisa muna 2011 uye yakaburitsa mazita matsva kanenge pagore. Basa rake rese rakagadzirirwa munyika yekare ya Girisi neRoma uye akasiyana mavara uye nguva dzenyaya dzavo. Iyo bhuku rekupedzisira yave iri Pakushandira humambo, rakaburitswa makore maviri apfuura. Uye zvakare wakunda prizes s Hislibris yeYakanakisa Spanish Munyori weNhoroondo Nhoroondo ye Vapanduki (2015).
Ndinotenda zvikuru zvako mamiriro ekunze, mutsa uye kuzvipira kune iyi bvunzurudzo kwaanotiudza nezve zvese zvishoma nezve ake ekutanga ndangariro zvinyorwa, zvavo vanyori y mabhuku vadikani uye vakamukurudzira zvakanyanya, ake tsika uye zvinokuvaraidza semunyori uye zvinotevera mapurojekiti.
Kutaurirana naPEDRO SANTAMARÍA
NHAU DZEMITAMBO: Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
PEDRO SANTAMARÍA: Ini handirangariri imwe kana imwe. Yekutanga ndangariro yebhuku randinayo ndere iyo nhevedzano yengano dzechiGiriki dzevana kuti amai vangu vakanditenga. Navo zvakatanga zvangu kuda zvinhu zvese chiGiriki. Ndinoyeuka ndichifara manakiro andaiita pamusoro pechiGreek panoply, ngowani yekuKorinde, hombo huru, shangu dzechipfuva. Ini ndakatorwa nezvakaitika zveOdysseus, Hercules naJason, iyo Trojan War ...
Nezve iyo yekutanga nyaya, Handina kukwanisa kutaura. Pamakore gumi nematanhatu ndakanyora a nyaya nezve madhouse Nhoroondo yegumi nenomwe yakafuridzirwa ne joke rinopenga iyo yakaudza kuti makesi akapfava aive sei pasi pevhu uye akanyanya kunyanya pamusoro. Pauriri hwepamusoro paive nehofisi yemutungamiriri.
AL: Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
PS: Yakanga isiri iyo yekutanga yakandirova, asi ndiyo yakandirova zvakanyanya nekuti yakanditungamira kune imwe nhilism: Iyo inosuruvarisa pfungwa yehupenyu, ivo Unamuno. Ini handisati ndanaya uye ndinopokana kuti ndichadaro.
AL: Ndiani munyori waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
PS: Ndinofanira kusarudza Homer. Iyo Iliad harina kubvira rakapfuurwa, uye harichazombove.
AL: Ndeupi munhu mubhuku iwe waungadai uchida kusangana nekugadzira?
PS: Ndingadai ndakada kugadzira Ignatius reilly, ivo Iko kusanganisa kweececiuos.
AL: Chero mania kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
PS: Ugh, yakawanda. Uye vanochinja nekufamba kwemakore. Pakati peanoreurika manias ndinogona kutaura kuti ikozvino ndiri muchikamu pombi pandinonyora. Ichi chikamu chakatsiva chikamu lollipops. Ndinofungidzira ndinofanira kuva chimwe chinhu chiri mumaoko uye chimwe chinhu mumuromo. A cup a coffee pakombuta zvakare yakakosha, kunyangwe kana isina chinhu.
AL: Uye yako yaunofarira nzvimbo uye nguva yekuzviita?
PS: Iyo nzvimbo inogara iri yangu kutumira, chero kwandinenge ndiri (ndafamba kakawanda kubva pandakatanga kutumira). Kana iri nguva, pakutanga Ndakanyora zvimwe husiku, kusvikira nguva dzekupedzisira, zvino ndinomuka pamatanhatu pamangwanani. Pfungwa dzinoita sedzinoyerera zvirinani panguva iyoyo, kunyangwe ini ndisina chokwadi zvachose.
AL: Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
PS: Zvekare, uye sekureva kwekunyepa, ndinofanira kutendeukira ku Iliad. La kudzika kwemavara, kurwa, kutaurirana, rufu ruripo nguva dzose, rukudzo, ushingi, kupokana ...
Kana ari ezvinyorwa zvisiri zvekunyepa, ndinofanira kudoma mabasa e Joaquin Gonzalez Echegaray nezveCantabria yekare. Ruzivo rwangu rwekutanga, okelaNdine chikwereti kumabhuku ake andakaverenga ndiine makore gumi nemana. Izvo, sekureva kwaStrabo, Cantabria yakanga yakundwa neSpartans chaive chinhu chakandiperekedza kwemakore. Nyaya dzakadai Pena Amaya y Kubasa reMambo ivowo vane mavambo avo muzvinyorwa zveEchegaray.
AL: Mhando dzako dzaunofarira kunze kwenhoroondo?
PS: Ndinoda kuverenga rondedzero uye uzivi. Uye ndine shungu nazvo kukura kwechikristu.
AL: Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
PS: Ndiri kuverenga Iyo Green Knight, ivo Xavier Lawrence. Sipo opera. Kana zviri zvekunyora, ini ndakangoisa kumagumo kune yangu Homwe yeroma. Iye zvino ndiri kusvetuka mapurojekiti akasiyana siyana, asi ndinofunga ndichaenderera mberi kusarudza kwemakore ekupedzisira e Humambo hweRoma.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo yakakuomera here kana iwe uchawana chinhu chakanaka kubva mazviri enganonyorwa dzeramangwana?
PS: Zvese. Ndiri kunetsekana kutarisisa mukunyora nekuti izvo zvatiri kusangana nazvo zvinotyisa munzira dzakawanda uye nemanzwiro e kusava nechokwadi Iri kukura. Kune rimwe divi, zviri pachena kuti chiitiko chega chega chinoshanda, neimwe nzira kana imwe, yekuzadza bhegi riya ratakatakura mukati uye iro rinofamba nekukurumidza rinova tsamba uye nyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Pedro Santamaría. Kubvunzana nemunyori we At the service of the empire